New Oppo F19 Pro na F19 Pro + 5G: atụmatụ, ọnụahịa na ndị ọzọ | Gam akporosis
Oppo amalitela smartphones ọhụrụ dị n'etiti maka ndị ọrụ ahụ na-echekwa ego. Anyị na-ekwu maka F19 Pro na F19 Pro +, Otu ụzọ mobiles nke na-enyefe Qualcomm mobile platform iji họrọ maka ngwọta Mediatek abụọ.
Ma ọnụ nwere ọtụtụ e ji mara na oru nkọwa yiri onye ọ bụla ọzọ, ihe anyị na-egosi n'okpuru. A gosiputara nke a na nhazi ha, nke yiri.
1 Njirimara na nkọwapụta nkọwapụta nke Oppo F19 Pro na F19 Pro +: ihe niile gbasara ekwentị ndị a
Njirimara na nkọwapụta nkọwapụta nke Oppo F19 Pro na F19 Pro +: ihe niile gbasara ekwentị ndị a
Anyị ga-amalite ikwu maka Oppo F19 Pro, ekwentị nwere Super AMOLED ihuenyo nke gbasara 6.43 sentimita diagonally ma mepụta mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ, nke a chịkọtara na usoro ngosi ngosi 20: 9. Ihe ngebichi na aru, nke enyere site na bezels belatara, bu 85.2%, o kwesiri ka a mara ya. N'aka nke ya, nchapụta kachasị nke ọ nwere ike nweta bụ nits 800, ebe enyere pixel pixel dị ka 409 dpi. N'ebe a, ekwesiri ighota na enyo a na F19 Pro +.
Na usoro nke arụmọrụ, Oppo F19 Pro na-eji Mediatek's Helio P95, ikpo okwu mkpanaka nwere isi asatọ nwere nhazi ndị a: 2x Cortex-A75 na 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 na 2.0 GHz. Nke a na-abịa na PowerVR GM9446 GPU ma bụrụ 12 nm, na mgbakwunye na agbakwunye na nke a RAM nke ụdị LPDDR4X na 8 GB, na ebe nchekwa dị n'ime nke 128/256 GB GB, enwere ike ịgbasa site na kaadị microSDXC.
N'ihe banyere Pro +, e nwekwara otu nhazi nke RAM na ohere nchekwa dị n'ime, mana ya na processor chipset Dimensity 800U nke Mediatek dere, otu nke dabere na node ọnụ ọgụgụ 7nm ma nwee nhazi isi na-esonụ: 4x Cortex-A76 na 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 na 2.0 GHz.
Quad igwefoto usoro nke ma smartphones bụ otu. Lee anyị kwụrụ n’ihu ihe mmetụta bụ isi nke 48 MP nwere oghere f / 1.7, oghere mpịakọta mpịakọta 8 MP nke nwere oghere f / 2.2 na oghere elekere 119 Celsius, onye na-agba egbe 2 MP nwere oghere f / 2.4 na oghere 2 MP ọzọ nwere oghere f / 2.4. N'ezie, ọkụ ọkụ LED abụghị nke pụtara ìhè na enweghị ya na modul foto maka ọkụ ọkụ ọkụ.
Igwefoto selfie bu otu ihe a maka mobiles abuo. Nke a bụ 16 MP ma nwee oghere f / 2.2. Na mgbakwunye, a na-etinye ya na oghere ihuenyo nke dị n'akụkụ aka ekpe elu ihuenyo ahụ.
Batrị maka ha abụọ bụkwa otu, nke 4.310 mAh ikike, ọ bụ ezie na n'ihe banyere nke mbụ enwere ndakọrịta na ịbudata ngwa ngwa nke 30 W, ebe n'ụdị dị elu karịa ọ bụ 50 W.
Akụkụ ndị ọzọ gụnyere njikọta 4G n'ihe banyere Oppo F19 Pro na 5G maka Oppo F19 Pro +. Ha abụọ jiri sistemụ arụmọrụ nke Android 11 nwere ColorOS 11.1 ma gosipụta Bluetooth 5.1, Wi-Fi band abụọ, GPS, ntinye USB-C, jaketisi ekweisi 3.5mm, yana onye na-agụ akara mkpịsị aka.
IKIRU Super AMOLED 6.43-inch FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ Super AMOLED 6.43-inch FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ
Nhazi Helio P95 Njupụta 800U
Ohere TERLỌ N'IME 128/256 GB gbasaa site na microSDXC 256 GB gbasaa site na microSDXC
GHARA CAMERAS 48 MP Isi + 8 MP 119º Wide Angle + 2 MP Macro + 2 MP Bokeh 48 MP Isi + 8 MP 119º Wide Angle + 2 MP Macro + 2 MP Bokeh
CAMERA N'IHU 16 MP 16 MP
UMUAKA 4.310 mAh na 30 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 4.310 mAh na 50 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na ColorOS 11.1 Gam akporo 11 na ColorOS 11.1
Njikọ Wi-Fi / Bluetooth 5.1 / GPS / 4G LTE Wi-Fi / Bluetooth 5.1 / GPS / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Side Mount Fingerprint Reader / Nghọta ihu / USB-C Side Mount Fingerprint Reader / Nghọta ihu / USB-C
Emeela ekwentị abụọ na India. A na-ere Oppo F19 Pro na 21.490 (~ 246 euro) na 23.490 rupees (~ 270 euro), n'otu n'otu maka ụdị dị iche iche 8 + 128 na 8 + 256 GB. F19 Pro +, maka 8 + 256GB, na-efu Rs 25.990, nke sụgharịrị ịbụ ihe ruru. ihe dị ka euro 300 na ọnụego mgbanwe ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Oppo F19 Pro na F19 Pro + 5G, ekwentị abụọ dị ọnụ ala na ngwa ngwa ngwa ngwa ruru 50 W